Mondello Miramare - I-Airbnb
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguFlavio
Amagumbi abucala kwiflethi kwi-villa ekujuleni kwelitye ukusuka kwisikwere saseMondello. I-panoramic solarium ekhethekileyo kumphezulu womgangatho owenziwe ngeebhentshi, iicushion kunye noomatrasi apho unokukhululeka khona imini nobusuku ngokuyimfihlo. Indlu ibekwe phantsi kwentaba yeCapo Gallo kwindawo ephezulu yeMondello apho unokukonwabela umbono ophefumlayo ojikelezwe buhlaza. Mna (Flavio), umfazi wam uMartina kunye nabantwana bam ababini uMarco noGiulia baya kuba khona ukuze bakwamkele.
Igumbi linegumbi lokuhlambela labucala elineshawa, i-air conditioner kunye nebalcony esetyenziselwa iindwendwe kuphela
Kuya kwenzeka ukuba sibe nesidlo sasemini okanye isidlo sakusihlwa kunye nathi ngokweemfuno zeendwendwe, ukuba imozulu yokuhambelana kunye nokuthembela inokudalwa.
Amagumbi abucala kwiflethi kwi-villa ekujuleni kwelitye ukusuka kwisikwere saseMondello. I-panoramic solarium ekhethekileyo kumphezulu womgangatho owenziwe ngeebhentshi, iicushion kunye noomatrasi apho unokukhululeka khona imini nobusuku ngokuyimfihlo. Indlu ibekwe phantsi kwentaba yeCapo Gallo kwindawo ephezulu yeMondello apho unokukonwabela umbono ophefumlayo ojikelezwe buhlaza. Mna (Flavio), umfazi wam uMartina ku…
4.89 (iingxelo zokuhlola 82)
Indlu ibekwe imizuzu emi-5 ukusuka kwisikwere kunye nolwandle.
Nditshate nomfazi wesizwe samaCzech.Oku kuthetha ukuba silusapho oluxubeneyo oluvuleleke ngokupheleleyo nolunobubele njengakwisithethe saseSicilian. Umnqweno kukukwazi ukuba namava amnandi kunye neendwendwe ezahlukeneyo ukusuka naphi na apho zivela khona, umbala, uhlanga, inkolo nje ngokuba zicocekile kwaye zihlonipha iindawo eziqhelekileyo.
Nditshate nomfazi wesizwe samaCzech.Oku kuthetha ukuba silusapho oluxubeneyo oluvuleleke ngokupheleleyo nolunobubele njengakwisithethe saseSicilian. Umnqweno kukukwazi ukuba namava…